Interview with the Founder of DEF CON and Black Hat Part 1 ~ Moe Htet Myint
Interview with the Founder of DEF CON and Black Hat Part 1
Moe Htet Myint Hacking News No comments
Dark Tangent ဆုိုတာကတော့ နာမည်ကျော် DEF CON Hacker Conference နဲ့ Black Hat Hacker Conferences တို့ကို စတင်တည်ထောင်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာမည် အရင်းကတော့ Jeff Moss ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နုိုင်ငံသား ဟက်ကာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဟာကတော့ CNN သတင်းဌာန နဲ့ Dark Tangent လို့ လူသိများတဲ့ Jeff Moss တို့ရဲ့ Interview ဖြစ်ပါတယ် ။
CNN : Black Hat နဲ့ DEF CON ကို ဘယ်လို စလုပ်ဖြစ်သွားတာလဲ?
MOSS : တကယ်တော့ Black Hat နဲ့ DEF CON က အချင်းချင်း ချိတ်ထားပြီးသားဗျ ။ DEF CON ကတော့ Black Hat ထပ် နည်းနည်း စောတာပေါ့နော ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက အရာအားလုံး က Underground ဆန်တယ် ။ Formal မဖြစ်ဘူး ။ Internet ခေတ်မှာ Company တွေက Security နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Information တွေ လိုလာတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က DEF CON ကို Professional ဆန်ဆန် လုပ်ပါလားဆိုတာနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတာ
DEFCON ကတော့ Hacking နဲ့ပတ်သတ်တာ အားလုံးပါတယ် ။ သော့ဖွင့်တာ ပါမယ် ။ XBOX Hacking . Electronic hacking အကုန်ပါတယ် ။
Black Hat ကတော့ Information Security ကိုပဲ အဓိကထား သွားတယ် ။
DEF CON အတွက်ကော Black Hat အတွက်ပါ ကြော်ငြာတွေ တစ်ခုမှမလုပ်ဘူး ။ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့် နားနဲ့ပဲ သွားတာ ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Security သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ မမြင်ဘူး ။ လူတွေ လာချင်တဲ့ Conference တစ်ခု လုပ်တဲ့လူ လို့ပဲ မြင်တယ် ။
CNN : Hacking နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခင်ဗျားရဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေကို ပြောပြပါ့လား?
MOSS : ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျုတာ ၀ယ်ပေးတာ ကျွန်တော် ၁၀ နှစ်လား ၁၁ လားတော့ သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအရာက လုံးဝ အံ့သြဖွယ်ရာ ပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကားမောင်းခွင့်မရသေး မဲပေးခွင့်မရသေး ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ အားလုံးက ကလေးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရွယ်မှာ လူကြီးတွေ စကားဝိုင်းထဲ ၀င်ပါခွင့်ရတယ် ။ ကျွန်တော့် အမေတွေ အဖေတွေ ဆီက မကြားဖူးတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကြားခွင့်ရတယ် ။ Internet ပေါ်မှာ ခင်ဗျား အသက်အရွယ် ယောကျာင်္းလား မိန်းမလား ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိတာမဟုတ်ဖူးလေ ။
အဲ့ဒီ့ ခံစားချက်က ကျွန်တော့်ကို ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်လွှမ်းမိုးခဲ့တာဗျ ။
CNN : Facebook ပေါ်လာတော့ အဲ့ဒီ့လို အရာတွေ ပျောက်သွားပြီလို့ ထင်လားဗျ?
MOSS : ပြောရရင် Hacking Culture ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အရာတစ်ခုက Hacker တစ်ယောက်ရဲ့ Handle ပဲ ပြောရရင် Indentity ပေါ့ ။ ကောင်းတာ လုပ်လုပ် ဆိုးတာလုပ်လုပ် အဲ့ဒီ့ ID ကပဲ ကိုယ်စားပြုတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျား ဘယ်သူဆိုတာ ခင်ဗျားကလွဲပြီး တခြားလူ သိမှာမှ မဟုတ်တာ ။ Facebook ရဲ့ Terms & Conditions တွေကို အတိအကျ လိုက်နာမယ်ဆုိုရင်တော့ ဒီလို ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး
CNN : ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားကရော
MOSS : အင်း ကျွန်တော့်နာမည်က အစက Dark Tangent နောက်တော့ တခြားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
CNN : အဲ့ဒီ့နောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လဲ?
MOSS : ဒါတော့ ခင်ဗျားကို ဘယ်လိုလုို့ ပြောလို့ ဖြစ်မလဲဗျ အဓိကကတော့ လူတစ်ချို့ နဲ့ မပတ်သတ်ချင်တော့တာရယ် လူတချို့ကို ကျွန်တော်မှန်းမသိစေချင်တော့တာရယ်ပဲ
CNN : ခင်ဗျား Hacking ကို စလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်တုန်းက ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်လဲ?
MOSS : အစတော့ Copyright တွေကို ကျော်ဖို့ လုပ်ဖြစ်တယ် ။ ပြောရရင် Reverse Engineering ပေါ့ဗျာ ။ အဲ့ဒီ့ တုန်းက Copyright ခေတ်ဗျ ။ Company တွေကလည်း သူတို့ ခွေတွေကို လူတွေ ဘယ်လို ကူးလို့ မရအောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကြံကြတယ် ။ လူတွေကလည်း ခွေတွေ Copy ကူးပြီး ဖြန့်ချင်ကြတယ် ။
CNN : ဒါဆို ခင်ဗျား အတွက် Hacking ဆိုတာက ဘယ်လို အဓိပ္ဗာယ် သက်ရောက်သလဲ?
MOSS : အင်း ဥပမာ Sony Playstation တွေကို Reserve Engineering လုပ်တဲ့ geohot ဆိုပါစို့ သူ့ အတွက် Hacking ရဲ့ အဓိပ္ဗာယ် ဘာလို့ထင်လဲ လူတွေ ဘာကြောင့် iPhone ကို Hack ချင်တယ်လို့ ထင်လဲ?
အဓိက ကတော့ ကျွန်တော်တုို့ သူပေးတဲ့ နည်းအတို်င်းမဟုတ်ပဲ ပိုသုံးချင်လို့ပဲ AT & T ဆိုတာထက် ပိုပြီး Iphone ကို သုံးချင်တယ် ။ အဲ့လိုပဲပေါ့ ကျွန်တော့် အတွက်လည်း အရာတချို့ကို ပုံမှန်ထပ် ပိုပြီး သုံးချင်လို့ပေါ့
CNN : ခုနောက်ပိုင်း Hacktivist ဆိုပြီး Hacker အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ အဖြစ်နဲ့ Data တွေ Leak လုပ်တယ် ။ တခြား နုိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်တယ် ။ ဒါကို ကောင်းတယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့သူတွေက လက်ခံနေတယ် ။ ခင်ဗျား အမြင်ကရော?
MOSS : ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် သူတို့ ပြောနေပုံတွေက သိပ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ ပုံ
မပေါက်ပါဘူး တိတိကျကျလည်း မရှိဘူး ပြောရရင် Hacktivism ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ကြီးအောက်မှာ နေပြီး သူတို့ ကိုယ် သူတို့ အကြောင်းရှာ ကာကွယ်နေတယ်လို့ပဲ မြင်တယ် ။ ခင်ဗျား တကယ်လို့ Hacktivist ဆိုတဲ့လူ ငါးယောက်ကို သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုပုံစံ ဆိုတဲ့ အကြောင်းသွားမေးကြည့်ပါ့လား အဖြေ ငါးမျိုး ထွက်လာမှာသေချာတယ် ။ ကျွန်တော့် အမြင်အရပြောရင် အဲ့ဒါ တံဆိပ် နဲ့တူတယ် ။ ဘယ်သူနေနေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နာမည်ပေးပြီး တံဆိပ်ကောက်တပ်ပလိုက်လို့ရတာပဲ ။
CNN : ဘာပဲပြောပြော သူတို့က တဖြည်းဖြည်း အင်အားကြီးမားလာတာတော့ အမှန်ပဲ ဥပမာ Anonymous လိုပေါ့ ။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ဒီကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်မှုများရှိမလား?
MOSS : လုံးဝ မရှိပါဘူး ။ သူတို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ Conference တွေမှာ လာပြောနေတဲ့ Speaker တွေလောက်တောင် မဟုတ်ဘူး ။ ပြောရရင် Media တွေရဲ့ မျက်လုံးအောက်ကို ရောက်နေလို့ နာမည်ကြီးနေတာလို့ တောင်ပြောရမယ် ။
Re >>Ghost Area